Hevitra tena tany am-boalohany hamerenana ireo tavoahangy plastika | Fanavaozana maintso
Nanjary fahavalo lehibe ho an'ny tontolo iainana ny plastika. Ary io dia fako mandany taona an'arivony maro hanaratsiana azy ary ny famokarana azy amin'ny ambaratonga lehibe manerantany dia mitombo isan'andro. Betsaka ny olona te hanamboatra simika ary manao dingana lehibe. Androany isika hiresaka amboary indray ny tavoahangy plastika ary ny fampiasana izay homenay azy.
Raha te hanana fotoana fanindroany ianao ary avereno ampiasaina ny tavoahangy plastika dia tohizo hatrany ny famakiana satria hanome anao hevitra tena tsara izahay amin'ity lahatsoratra ity 🙂
1 Fanodinana tavoahangy
2 Fananganana vilany zavamaniry
3 Lalao ho an'ny alika
4 Orchard mitsangana
5 Mpanome sakafo
6 Kifafa ao an-jaridaina
7 Banky Piggy
Ny tavoahangy plastika dia vokarina isan'andro amin'ny taonina an-tapitrisany maro manerantany. Noho io antony io dia mijaly noho ny fandotoana izay miteraka ny planeta ny fongana karazana zavamaniry sy zavamaniry maro, ankoatry ny fanangonana fako. Vokatr'izany, fanentanana marobe no nateraka erak'izao tontolo izao izay manandrana mampiato ny fandravana ny planeta.
Ny fanentanana dia tsy manandrana mamerina ny plastika fotsiny, fa koa ny tavoahangy vera, alimo, taratasy ary baoritra. Eto dia miresaka plastika isika satria io no iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra eto an-tany. Tena bobongolo sy mahatohitra izy io. Misaotra an'io, saika ny zavatra rehetra azo amboarina. Manaraka izany, hanome hevitra tsara anao izahay ny amin'izay tokony hatao hanodinana ireo tavoahangy plastika izay azo antoka fa lanina isan'andro ao an-trano.
Fananganana vilany zavamaniry
Matetika ny tavoahangy plastika no ampiasaina hanamboarana vilany voninkazo. Na izany aza, tsy ny karazana mpamboly ihany no mendrika azy. Ny plastika dia ahafahantsika manamboatra endrika manokana kokoa izay afaka mitondra fikitihana kanto amin'ny zaridaina na manatsara ny mahasarika maso. Azontsika atao ny manapaka ny plastika misy endrika biby ary avy eo mandoko azy ireo amin'ny loko tadiavintsika. Manoritra ny antsipiriany, Hampiasa marika mainty ho an'ireo drafitra sy ireo miloko izahay mba hanomezana azy amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Rehefa te hametraka zavamaniry mihantona isika dia tsy mila manao lavaka kely roa fotsiny izay hametrahantsika manantona na farango. Izany no ahafahantsika manana mpamboly lavorary manana fomba tsara kokoa noho ny maro amin'ireo izay amidy amin'ny vidiny lafo kokoa ary ora vitsivitsy fotsiny no natokanao. Maimaimpoana ny vidiny, satria hampiasa tavoahangy plastika izay hatsipinao ao anaty kaontenera ianao.
Lalao ho an'ny alika
Mahafinaritra be ny mijery alika milalao sy manao zavatra fetsy. Noho izany, afaka manao karazana kilalao misy tavoahangy plastika isika. Ity kilalao ity koa dia mampivelatra ny fahalalan'ny sakaizantsika ary hanampy antsika hitazomana azy ireo mandritra ny fotoana maharitra izany.
Mba hananganana azy dia tsy maintsy manindrona ireo tavoahangy isika mba hahafahana mametraka tsorakazo iray izay azo atao axis. Ireo tavoahangy dia tsy maintsy afaka mihodina raha omen'ny alika azy amin'ny tanany. Ao anaty tavoahangy no ahafahantsika mametraka sakafo ka, rehefa mihaodihaody sy mihodina izy, dia latsaka ao aminy ny sakafo. Amin'izany fomba izany dia ho takatry ny alika fa tsy maintsy mikapoka ilay tavoahangy izy ary mamadika azy io hahazoana sakafo.
Betsaka ny olona manana zaridaina ary natokana hiasa amin'ny zaridaina an-tanàn-dehibe. Amin'ity tranga ity dia afaka manana zaridaina mitsangana ianao amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy plastika fotsiny. Hanampy antsika hamboly legioma kely na anana manitra toy ny rosemary, thyme ary mint.
Mba hananganana an'io zaridaina mitsangana io dia mila apetrantsika ambony ambany ireo tavoahangy plastika. Manamboatra lavaka ao anaty fotony izahay mba hahafahantsika mifanitsy amin'ny tavoahangy iray amin'ilay iray hafa. Hanao lavaka hafa koa ao anaty satroka isika ka ny rano be loatra dia mandeha amin'ny zavamaniry etsy ambany ary manohy manondraka ny tavoahangy manaraka. Izahay dia manao perforation marindrano ahafahantsika mamboly anana na anana manitra ary dia izay. Ho fanampin'izany, dia afaka ampiasaina ho haingon-trano raha ahantona amin'ny rindrina.
Mety misy biby fiompy ao an-trano ary mety manan-janaka izy ireo. Ohatra, ny hamsters dia biby izay mazàna manana zanaka maro matetika. Raha te hivarotra azy ireo isika dia tokony ho zazakely nefa tsy maintsy mahaleo tena amin'ny reniny. Noho izany dia afaka mametraka tavoahangy plastika isika ary manamboatra lavaka maro hamakivakiana ny vavan'ilay mpampitony.
Izy io koa dia ampiasaina hanomezana ronono an'ireo alika kely amin'ny fomba tsotra. Amin'izany no hanomezantsika kely ny renintsika hiala sasatra kely amin'ny alika kely.
Kifafa ao an-jaridaina
Fomba iray hafa hanodinana ireo tavoahangy plastika ny famoronana kifafa amin'ny zaridaina. Mety ho ilay loko tadiavinao izy io, satria azonao atao ny mandray ny tavoahangy loko ilainao. Mba hamoronana kifafa ity, mila manapaka ny tavoahangy roa fotsiny ianao ary manamboatra sisiny amin'ilay ampahany notapahinao. Ny zorony dia ampiasaina amin'ny fanadiovana amin'ny fomba mitovy amin'ny kifafa mahazatra. Ny fisokafan'ny tavoahangy dia manantona ny kibay izay itazonantsika azy.
Isika rehetra dia te-hihary vola hividianana izay ilaintsika na tadiavintsika ary hamakivakiana izay tiantsika hatrizay. Raha te-hitahiry tsaratsara kokoa ny tahiry izay harentsika isika, ny tsara indrindra dia ny piggy bank. Ary inona no tsara kokoa noho ny banky misy piggy vita amin'ny tavoahangy plastika namboarina.
Mba hahavitana azy dia mila maka ny tampon'ny tavoahangy maromaro ianao. Ilaina amin'ny fitahirizana vola madinika ny satroka. Ny faritra rehetra etsy ambony dia mifamatotra amin'ny visy. Na dia tsy dia mahatohitra loatra aza izy ireo, dia ampy ny miambina ny volanao raha mbola eo am-panangonana ianao. Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny fananganana boaty vola plastika ny tenanao dia azonao omena ny zanakao ny lanja amin'ny lafiny roa lehibe amin'ny fiainana. Ny voalohany dia ny fanodinana ary tsy ny tavoahangy plastika fotsiny, fa izay rehetra azo averina simbaina. Ny zavatra faharoa dia ny mianatra mitsitsy vola, satria zava-dehibe ny fananana zavatra voatokana rehefa tonga ny fotoana mahory.
Araka ny hitanao dia afaka manamboatra asa tanana tsy voatanisa amin'ny tavoahangy voaverina ianao. Efa nanandrana nanao karazana zavatra hitantsika ve ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Amboary ny tavoahangy plastika
Inona ny vokatra biodegradable